कसरी सुरु भएको थियो भ्यालेन्टाइन डे मनाउने प्रचलन - InHeadline
कसरी सुरु भएको थियो भ्यालेन्टाइन डे मनाउने प्रचलन
By R. sharma on Feb 14,2018 - 10:00
इ.सं. २६९ को १४ फेब्रुअरीमा सन्त भ्यालेन्टाइनलाई फाँसी दिइएको थियो । भ्यालेन्टाइन रोमका पादरी थिए । उनी पादरी मात्र थिएनन्, प्रेमका पुजारी पनि थिए । त्यसैले उनलाई फाँसी दिइएको दिनलाई प्रेम दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइन्छ ।रोमका शासक क्लाडियसले उनलाई फाँसी दिएका थिए । क्लाडियस तेस्रो शताब्दीमा रोमका सम्राट थिए । उनले भ्यालेन्टाइनलाई किन दिए त फाँसी ?
ट्याग - भ्यालेन्टाइन